ယနေ့ခေတ်နည်းပညာဆိုဒ်တိုင်းတွင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပေါ်လွင်နေသောအကျော်ကြားဆုံးဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည် ကြီးမားတဲ့ data တွေကို။ ငါထင်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းက၎င်း၏အလွန်အကျွံသုံးခြင်းနှင့်အတူကယ့်ကိုဖြစ်ပျက်ရဲ့ပုံဖော်သည့်တိပုံရိပ်နှင့်အတူ disservice လုပ်နေတယ်ထင်ပါတယ်။
Big data သည်ကြီးမားသောကြီးမားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိသောအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောပမာဏကိုဖော်ပြရန် buzzword သို့မဟုတ် catch-ထားသောစကားစုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရာဒေတာဘေ့စ်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အရ ဝက်ဘ်ဆိုက်
ပြproblemနာကကြီးမားတဲ့ဒေတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စ။ Big data သည်အခြေခံအားဖြင့် ၂ ဖက်မြင်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ပြနာကကုမ္ပဏီများသည်ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စ်များကိုတိုက်ခိုက်နေရုံသာမကအချက်အလက်များ၏အလျင်ကိုသာတိုက်လှန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအချက်အလက်စီးဆင်းမှုများသည်အချိန်နှင့်အမျှဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန်အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ရန်နှင့်တင်ပြရန်လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီရောက်ရှိနေသည်။
သင်၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်“ ကြီးမားသောဒေတာ” သည်မည်သည့်အချိန်တွင်အလွန်ပြင်းထန်သောစကားလုံးဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသည်။ ငါဒီနေ့နံနက်ခင်းကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်စကားစမြည်ပြောနေတယ်။
ပြနာမှာသင်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြုတ်ချခြင်းနှင့်၎င်းကိုနောက်ကွယ်မှအဓိပ္ပာယ်ကိုကြားနာ။ အသုံးပြုသူအများစုသည်အမှန်တကယ်နားမလည်သည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ အလားတူအရာများ "cloud computing" နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နှင့်စာရင်းအပေါ်ဆက်လက်။
ကျိန်းသေကြီးစွာသောဖတ်ပါ။ ဒါဟာအလွန်သိကောင်းစရာများ Doug ဖြစ်ခဲ့သည်, မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !.
ဂရိတ်ဆောင်းပါး Doug ။ streaming ဒေတာကိုနှိပ်သော့ချက်ပါ! အတွင်းပိုင်းစနစ်နှင့်ပြင်ပရင်းမြစ်များမှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းခြင်း၊ ဒေတာများကိုသန့်ရှင်းခြင်း၊ မရေရာသည့်ကိုက်ညီမှုအချို့ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ သတိပေးချက်များနှင့်သတိပေးချက်များကိုပေးပို့ခြင်းသည်လှပသောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြောင်းလဲနိုင်သောကုမ္ပဏီများသည်သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်ရှိသည်။ အမြတ်ရရန်အမြန်ရရှိရန်ကုမ္ပဏီမှ ၁၀-၁၅% ထိတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် streaming data ကိုစတင်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ အရောင်း၊ ပို့ခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်းများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ။